သူတို့တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ?? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » သူတို့တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ??
Posted by Burma on Oct 11, 2011 in History, Politics, Issues | 12 comments
သူတို့တွေ မြန်မာပြည်ကို နှစ်ပေါင်း 22 နှစ်ကျော်ကြာ ကြီးစိုးခဲ့ကြတယ် ၊
သူတို့တွေ ဒီမြန်မာပြည်မြေကြီးရဲ့ အောက်က သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့တွေ ၊ ပုလဲ တွေ ၊ ရွှေတွေ ၊ ကျောက်စိမ်း ၊ သယံဇာတတွေကို ဒီ 22 နှစ်အတွင်း ရသမျှ အကုန်ထုတ်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ သူတို့တွေ မြန်မာပြည်ကြီးကို သူတို့စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။
သူတို့တွေ မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ သမိုင်းဝင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ ရဟန်းတော်တွေကို လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ခဲ့ကြတယ် ၊
သူတို့သည် သူတို့ နှစ်သက်တဲ့ သူတို့ စိတ်ကြိုက်သူကို တင်မြှောက်ခဲ့ပြီး ၊ ရွေးကောက်ပွဲကို ဂိမ်းကစားသလို ကစားခဲ့ကြတယ်
သူတို့ကို မေ့နေကြပြီလား ??
သူတို့ ဘယ်ကို သွားကြ၇မှာလဲ??
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀ လောက်ကနဝမတန်းကျောင်းသားပဲဖြစ်မှာပါ။
မေးခွန်းတွေမေးမေးနေတာ တစုံတရာကိုဆွပေးပြီး သဘောထားတခုခု ကိုယူနေသလိုပါပဲလား??????
♦ ကြိုက်တာနဲ့ စမ်းသပ်ပါ ၊ http://www.facebook.com/meetlj အဲဒါ ကျွန်တော့ Facebook ပါ ၀င်လည်လိုက်ပါ. ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာ မကျေနပ်သေးရင် art.min10@gmail.com ကို အဒ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော့ အရေးအသားကို မကျေနပ်လို့ ဆိုရင် ကျွန်တော်ခံနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အသုံးမကျရင် ကျွန်တော် ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ အသက် ကို သံသယရှိတာ ကတော့ တကယ်ကို မကျေနပ်စရာပါပဲ။ ကိုးတန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ဒီလောက်တောင် အထင်သေးတတ်တဲ့သူရှိသေးလားဆိုပြီး အံ့သြမိပါတယ်။
ဖြစ်နေတာတွေရှိပါတယ် ဖြစ်နိုင်တာတွေလဲ အများကြီးပါ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အရာတွေဟာလည်း
hello everybody ပြောချင်တဲ့သဘော က အတွေးအခေါ်ရင့်ကျက်တဲ့ အပိုင်းကို ဆိုလိုတာထင်ပါတယ် ။
♦ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာရှိတယ်.. သူ့ပုံကြီး မဖြုတ်ရသေးဘူး
♦ ဆိုလိုချင်တာက ဒီလိုပါ အကိုရဲ့။ လူတွေက အခု မြစ်ဆုံစီမံကိန်းတွေ ၊ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းတွေ ၊ အခုလက်ရှိ ပြသနာတွေကို စိတ်ထဲထားနေကြပြီး ၊ သူတို့တွေကို မေ့နေကြဘီလား ၊ 2010 ရွေးကောက်ပွဲ ကို မေ့နေကြပြီလား ၊ ဟိုနေ့က Olympic အားကစားဂျာနယ်မှာဖတ်မိပါတယ် ၊ မန်ယူနဲ့ ဘယ်အသင်းနဲ့လဲမသိဘူး 92 Champion League ဖလားမှာထင်တယ် လုပ်ပွဲကစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပြန်ထွက်နေလို့ ပြန်လည် စစ်ဆေးဖို့ လုပ်နေတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒီမှာက သူတို့ တွေပျောက်သွားတာ တစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူး လူတွေကို လုံးဝကိုတော်တော်လေး မေ့ကုန်ကြဘီ။ သူတို့အပြစ်တွေကို ဒီတိုင်းပဲ ထားကြတော့မှာလား။ အဲဒိဟာကို Messageပို့ချင်တာပါ။
မိန်းမအငယ်ယူပြီး နှပ်သူကနှပ်၊ ကလပ်ကဇိမ်မယ်လေးတွေခေါ်ပြီး အပန်းဖြေသူကဖြေ၊ ဘလူးလေဘယ်လ် သောက်ပြီး ဆက်ရက်မင်း စည်းစိမ်ခံစားသူကခံစား၊ ယတြာချေရင်း တရုတ်သိုင်းကား ကြည့်သူက ကြည့်နဲ့ပေါ့ကွယ်…။ မပူပါနဲ့ မကြာခင် သူတို့ပြန်လာကြလိမ့်မယ်….
.. ၂၀၀၁ စက်တင်ဘာ ၉ ကစခဲ့တာပေါ့..
အမေရိက တိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ဆိုပြိး.. အမေရိကန်တွေ ဒေါသတွေထွက်..။ ကားတွေ..လေယဉ်တွေ..သင်္ဘောတွေ..အိမ်တွေမှာ.. အလံတွေလွှင့်..
ယူ..အက်စ်..အေ..။ယူ..အက်စ်..အေ..။ နဲ့.. ဇာတိမာန်တွေဆွဲတင်.. အညံ့မခံတဲ့စိတ်တွေ..ထိုးတက်…
အဲဒီအချိန်ကစပြိး.. အဲဒီအခါက သမ္မတကြီးဘုရ်ှက.. ကမ္ဘာတလွှားက.. အကြမ်းဖက်သူများကိုစစ်ကြေငြာပါတယ်..။
အဲဒီနောက်. ဘာမှန်းမသိ..ညာမှန်းမသိနဲ့.. အီရတ်စစ်ကြီးကို ဖန်တီး..။ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကို.. ဖမ်းပြီး.. ဆွဲကြိုးချသတ်..။
ကမ္ဘာ့ရာဇ၀င်မှာ.. ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံး..စစ်ပွဲကြီး၂ခု.. စခဲ့/တိုက်ခဲ့တယ်..။
အဲဒီအချိန်တုံးက.. လွှတ်တော်၂ရပ်လုံးကလည်း.. မဲပြတ်ပြတ်နဲ့..အားရပါးရထောက်ခံပေးတာပါပဲ..။.. သွေးတက်နေချိန်မို့.. ချ..ချ..ချသာချပေါ့…။
အဲဒီကနေ.. ၁၀နှစ်အကြာ.. အခုမှာ.. အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ အမေရိကခင်ဗျာ.. ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်…
ဘုရှ်..အစိုးရအဖွဲ့ သုံးပစ်လိုက်တဲ့ငွေက.. နည်းနည်းနောနောလား..
တိုင်းပြည်ကသာ အကြွေးတွေထပ်သွားတာ..။ အဲဒီအစိုးရအဖွဲ့ က..အဓိကပေါ်လစီမိတ်ကာတွေမှာ.. မီလျှံနာ့..မီလျှံနာတွေချည်းဖြစ်ကုန်ပါတယ်။။
ဘာတွေဖြစ်သွားသလည်း.. အော်စကာရတဲ့.. Fahrenheit 9/11 ဖာရင်ဟိုက် နိုင်အီလဲဗဲင်းဒေါ့ကျူမန့်ထရီမှာပါတယ်..။
အဲဒီအချိန်..အဲဒီအစိုးရအဖွဲ့က.. အဲဒီလူထုကရွေးထားတဲ့..အမတ်တွေထောက်ခံချက်နဲ့ပဲ.. စစ်တိုက်တာပဲ..။
ခုအချိန်မှာ.. ဘယ်သူ့အပြစ်လည်း.. ပြောမရ..။ စစ်ခုံရုံးတင်ခွင့်မရှိ..။
လူထုနဲ့အတူတူ.. ကြိုးပူးချည်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ.. အမှားတွေကို.. သမိုင်းမည်းမည်းတွေပဲလုပ်လိုက်ရတတ်ပါတယ်.။
မေ့ နိုင်မယ်လို့ကော မင်းထင်လား ????
သူတို့တွေ၇ှိပါတယ် အလုံခြုံဆုံးနေရာတစ်ခုမှာပေါ့ ………….